Ciidamadii iyo gaadiidkii Captan Moomin ayaa dib ugu soo laabtay DF - Axadle – Axadle
Ciidamadii iyo gaadiidkii Captan Moomin ayaa dib ugu soo laabtay DF – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ku sugan Axadle Soomaaliya ee Muqdisho, ciidamo iyo gaadiid uu qabtay taliye ku xigeenka qeybta gaarka ah ee booliska Muumin Ciise Maxamuud ayaa xalay lagu soo celiyey dowlada Soomaaliya.
Tallaabadan ayaa timid kadib wadahadallo dhex maray saraakiisha sare ee ciidamada ee degmooyinka Hodan iyo Howl-Wadaag iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiir ku xigeenka warfaafinta Al-Cadaalla.
Saraakiisha hogaamineysa Ciidanka Badbaado Qaran iyo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa isku raacay in dib loo soo celiyo ciidamadii iyo gaadiidkii ay kala wareegeen Taliye kuxigeenka Haramcadka Moomin Ciise Maxamuud oo ugu dambeyn si guul ah ku baxay.
Taliye ku xigeenka ciidamada Haramad Moomin ayaa ku adkeystay inuusan dib ugu laaban doonin gacanta dowlada Soomaaliya, wuxuuna si rasmi ah ugu biiray xoogaga ka soo horjeeda in la kordhiyo xukunka qeybo ka mid ah Caasimadda Muqdisho.
Ciidamada Moomin ayaa raali galin ka bixiyay talaabadaasi waxayna sheegeen in aan lagu soo wargalin goosashada isla markaana ay ku egyihiin taliye ku xigeenada.
Kahor intaysan bilayska iyo askarta ka tirsan ciidankoodu ku biirin mucaaradka badbaadada qaranka, taas oo ka hor imaanaysa sharciyada loo sameeyay dowlada iyo baarlamaanka kadib markii looga soo noqday.
Muddo kordhinta ma dhicin kadib markii Caasimadda Muqdisho ay ku dagaallameen xoogag taabacsan madaxda dowladda federaalka ee waqtigeedu dhammaaday iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeday muddo kordhinta.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa ogolaaday in dib looga wada hadlo heshiiskii doorashada ee dhacay Sebtember 17 wuxuuna ku dhawaaqay in arrimaha amniga iyo doorashooyinka guud loo gacan geliyay ra’iisul wasaarihiisa, Maxamed Xuseen Rooble, laakiin xoogagga ka soo horjeeda kordhinta ay weli taagan yihiin. Muqdisho.
XAQIIJIN: Premier League Oo Baadhitaan Ku Bilaabay Manchester United &